Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Sakafo tsy misy ronono vaovao: Miorina amin'ny microalgae voalohany
Sophie's BioNutrients, orinasa teknolojia famokarana sakafo an-tanàn-dehibe maharitra, miaraka amin'ny foibe fanavaozana Ingredion Idea Labs® any Singapore, dia niara-niasa tamin'ny famokarana ny fromazy voalohany miorina amin'ny microalgae, vita amin'ny ronono microalgae tsy misy ronono avy amin'i Sophie's BioNutrients. Miaraka amin'ny safidy vegan, tsy misy ronono ho an'ny fromazy izay mihamitombo ho setrin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny zavatra hafa mifototra amin'ny zavamaniry, ity fromazy tsy misy ronono ity dia fanampim-panampiana efa andrasana.
Ity zava-baovao avy amin'ny fromazy ity dia mirehareha amin'ny mombamomba ny tsiro umami sy ny tsirony, maka tahaka ny fromazy Cheddar voajanahary ary azo tetehina amin'ny takelaka fromazy, miempo ao anaty toast, mipetaka amin'ny sandwich, na mipetaka amin'ny crackers na mofo ho toy ny fiparitahana manankarena sy gooey.
Ny zavatra rehetra azon'ny ronono atao, ny microalgae dia afaka manao Cheddar
Ny ekipa ao amin'ny Sophie's BioNutrients dia niara-niasa tamin'ny ekipan'ny manam-pahaizana ara-teknika ao amin'ny Ingredion mba hamoronana ny fromazy ho an'ny vegan. Namboarina tamin'ny fampiasana lafarinina proteinina microalgae, azo alaina amin'ny karazana vokatra roa - fromazy tsy misy ronono tsy misy ronono sy fromazy tsy misy ronono.
Ny fandrahoan-tsakafo iray amin'ny fromazy microalgae semi-hard dia manome avo roa heny ny tambin'ny B12 isan'andro. Voajinja ihany koa izy io - tsy nisy omby naratra nandritra ny dingana - ary manana dian-tongotra ambany karbaona.
"Ny microalgae dia iray amin'ireo loharanon-karena be otrikaina sy mikoriana indrindra eto an-tany. Androany dia nasehonay ny lafiny hafa amin'ny fahafaha-manao tsy manam-petra azon'ity superfood ity atolotra - safidy azo avy amin'ny ronono sy laktose tsy misy laktose amin'ny fromazy izay, noho ny microalgae, dia manome votoaty proteinina ambony kokoa noho ny ankamaroan'ny safidy tsy misy ronono. Faly be izahay amin'ity fivoarana ity amin'ny sakafo tsy misy allergène sy ny fahatsinjovana ny fisakafoana mitambatra kokoa, ”hoy i Eugene Wang, mpiara-manorina & Tale Jeneralin'ny Sophie's BioNutrients.
Ai Tsing Tan, talen'ny fanavaozana ao amin'ny Ingredion dia nizara ihany koa hoe: "Rehefa manao fanavaozana izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny mpanjifa, dia zava-dehibe ny fifantohana amin'ireo toetra manan-danja amin'ny famoronana vokatra tian'ny mpanjifa. Ny fomba fiasantsika amin'ny fromazy tsy misy ronono dia ny mamolavola azy akaiky araka izay azo atao amin'ny fromazy amin'ny tsiro sy ny texture. Ny mpanjifa dia afaka mankafy traikefa amin'ny fihinanana fromazy vegan matsiro sy azo fantarina ary tiana.”
Miasa mba hamoronana hoavy ara-tsakafo maharitra kokoa
Ity fanavaozana farany ity dia mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa matanjaka amin'ny solon-dronono mifototra amin'ny zavamaniry maneran-tany. Ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fepetra tsy mahazaka laktose dia antony lehibe amin'ny fitondrana ny tsena.
Araka ny filazan'ny orinasa mpikaroka momba ny tsena iraisam-pirenena Research and Markets, ny tsenan'ny fromazy vegan manerantany dia mitentina 1.2 miliara dolara amin'ny taona 2019 ary tombanana ho 4.42 miliara dolara amin'ny 2027, miitatra amin'ny taham-pitomboana isan-taona (CAGR) 15.5% manomboka amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2027. XNUMX.
Ny Sophie's Bionutrients dia mamokatra lafarinina microalgae tsy misy loko miloko tsy miandany nambolena voajanahary avy amin'ny microalgae sela tokana ary alaina ao anatin'ny telo andro ao anaty tontolo arovana.
Ny tadin'ny microalgae ampiasain'ny Sophie's BioNutrients dia US GRAS sy European Food Safety Authority (EFSA) nankatoavina ho fangaro sakafo na fanampin-tsakafo.
Ny Ingredion dia mampivondrona ny fahafahan'ny olona, ​​ny natiora ary ny teknolojia hanatsara ny fiainana rehetra. Ny Ingredion dia manolo-tena amin'ny fanatsarana ny fiarovana ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny fomba fitrandrahana maharitra sy ny tolotra vokatra hatsaraina hanohanana ny fiarovana ara-tsakafo, ao anatin'izany ny fifantohana amin'ny proteinina hafa. Ingredion dia manome fahaiza-manao amin'ny fanaterana vokatra tian'ny mpanjifa amin'ny famoronana izay manaraka miaraka amin'ny Sophie's Bionutrients.